सिजनको पहिलो एल क्लासिको आज, कस्ले मार्ला बाजि ?
Home फुटबल सिजनको पहिलो एल क्लासिको आज, कस्ले मार्ला बाजि ?
एजेन्सी । स्पेनिस ला लिगामा आज जारी सिजनको पहिलो एल क्लासिको हुँदै छ । नेपाली समयअनुसार राति ८ बजेबाट सुरु हुने उक्त बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीचको भिडन्त रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त खेल युइएफए यूरोपियन च्याम्पियनसिपको फाइनल पछाडी सबैभन्दा बढी हेरिने क्लब स्तरीय फुटबल खेल हो ।
बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याप नोउयमा हुने उक्त एल क्लासिकोमा दुवै टिम एक–अर्कामाथि जित दर्ता गर्दै आफूलाई बलियो सावित गर्ने दाउमा हुनेछन् । कार्लो एन्सेलोट्टी नेतृत्वको रियल जारी सिजन शीर्ष स्थानमा छ भने रोनाल्ड कोइम्यानको टिम बार्सिलोना रियलभन्दा दुई अङ्कले पछाडि परेको छ ।
आजको खेलमा रियल मड्रिड शीर्षताको खोजीमा छ । हाल ऊ १७ अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ । रियलले आठ खेल खेलेको छ । यता, बार्सिलोना भने १५ अङ्कका साथ आठौँ स्थानमा छ । आज रियलमाथि जित दर्ता गर्दै बार्सिलोना शीर्ष क्लबविरुद्धको अङ्क दुरी घटाउने योजनामा छ ।
अघिल्ला सिजनहरूमा बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीचको भिडन्त ‘एल क्लासिको’लाई एक प्रतीक्षित खेलका रूपमा हेरिन्थ्यो । यसलाई समर्थकहरूले एउटा खेलमात्र नभई प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा मान्थे । तर स्टार खेलाडीहरूले स्पेन छोडेसँगै यसको महत्त्व घटेको आँकलन गरिन्छ ।
हालसम्म बार्सिलोना र रियलबीच २ सय ४६ खेल भएको थियो । जसमध्ये रियले ९८ ले र बार्सिलोनाले ९६ खेल जितेको थियो । ५२ खेल भने बराबरीमा टुंगिएको थियो । गत सिजन भने बार्सिलोनाले रियललाई हराउन सकेन । क्याप नोउमा भएको पहिलो खेलमा ३–१ ले विजयी भएको रियलले अल्फ्रेडो डि स्टेफानोमा २–१ को जित निकालेको थियो ।
Previous articleयी हुन् हालसम्म भारत र पाकिस्तानबीच भएका ४ रोमाञ्चक खेलहरु
Next articleभारत विरुद्ध बलिया तिन पाकिस्तानी ब्याटर
मोहम्मद रिजवानको शतकमा दक्षिण अफ्रीकामाथी पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित
नेक्सस कप क्रीकेट:ग्रेट हिमालय र रक एघार विजयी
सप्तरी प्रीमियर लिगको खेलतालिका सार्वजनिक
गुलशनलाई पहिलो पटक टिममा समेट्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा
बेल्जियम अपराजित रहदै नकआउट चरणमा
पिएम कपको लागि सरद भेषावकरको कप्तानीमा एपिएफको टोली घोषणा
पोखरामा फागुन १२ देखि स्व. महेश खड्का स्मृती क्लब स्तरीय भलिबल...
नेपाली फुटबल टिमलाई नेपाल सरकारले जनही ५ लाख दिने